Football Khabar » बार्सिलोनाका प्रशिक्षकलाई १२ खेलसम्म प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने !
बार्सिलोनाका प्रशिक्षकलाई १२ खेलसम्म प्रतिबन्ध लाग्न सक्ने !
स्पेनिस फुटबल क्लब बार्सिलोनाका प्रशिक्षक रोनाल्ड कोम्यानमाथि लामो प्रतिबन्धको सम्भावना बढेको छ । केही समयअघि ला लिगामा भएको सिजनको पहिलो इएल क्लासिको खेल दौरान कोम्यानको अभिव्यक्तिलाई लिएर ला लिगाले उनीमाथि अनुशासनको कारबाही गर्न छानबिन थालेको छ । स्पेनिस मिडियाले यस विषयमा ताजा रिपोर्ट छापेका छन् ।
गत अक्टाबेर २४ मा बार्सिलोनाको घरेलु मैदान क्याम्प नोउ रंगशालामा भएको खेलमा रियल मड्रिडले बार्सिलोनालाई १–३ को हार चखाएको थियो । सो खेलमा रियललाई अनावश्यक रूपमा पेनाल्टी दिएको भन्दै खेलपछि कोम्यानले रेफ्री र भिएआर प्रणालीकै चर्को आलोचना गरेका थिए । उनले त ‘रियल मड्रिडलाई जिताउन रेफ्री र भिएआर’बीच मिलेमतो रहेको भन्दै गम्भीर आरोप समेत लगाएका थिए ।
सो खेल १–१ मा रहेका बेला रियलले विवादास्पद पेनाल्टी पाएपछि गोल गर्दै खेल आफ्नो पकडमा ढालेको थियो । कोम्यानले खेलपछि ‘रियललाई अनावश्यक पेनाल्टी दिएको तर आफूहरूले पाउने दुई पेनाल्टीमा भिएआरमार्फत् जाँचसमेत नगरेको’ भन्दै आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनले ‘ला लिगाको भिएआरलाई आफूले बुझ्न नसकेको’ भन्दै ‘भिएआरलाई सधैं बार्सिलोनाविरुद्ध प्रयोग गर्ने गरेको’ आरोप लगाएका थिए ।
डच म्यानेजर कोम्यानले ला लिगाको खेल पद्धति र संस्थागत रूपमै गम्भीर आरोप लगाएपछि ला लिगाले उनको अन्तर्वार्ताको भिडियो फुटेजका आधारमा छानबिन थालेको स्पेनका मिडियाले जनाएका छन् । ‘क्याटलान रेडियो’ को अनलाइन संस्करणमा प्रकाशित समाचारअनुसार यदि सो विषयमा कोम्यान दोषी साबित भए उनलाई कम्तीमा २ खेल देखि बढीमा १२ खेलसम्म प्रतिबन्ध लाग्ने व्यवस्था छ । साथै, उनलाई आर्थिक जरिमानासमेत हुन सक्छ ।
यदि लिगले यस विषयलाई ‘गम्भीर विषय’का रूपमा लिएर सोहीअनुसार निर्णय गरे ला लिगाको अंक तालिकामा बार्सिलानाले जोडेको निश्चित अंकसमेत लिगले कटौती गर्न सक्छ । ‘मार्सा’ र ‘स्पोर्ट’ पत्रिकाले पनि यस विषयमा रिपोर्ट छापेका छन् । ला लिगाले यस विषयमा अनुसन्धान थालेको दुई साताभित्रमा निर्णय लिइसक्नेछ । रिपोर्टअनुसार लिगले मंगलबारबाटै यस विषयमा छानबिन सुरु गरेको छ ।
ला लिगामा हाल बार्सिलोना ६ खेल सकिँदा मात्रै ८ अंक जोडेर १२औं स्थानमा छ । यता, साबिक च्याम्पियन रियल मड्रिड ७ खेलबाट १६ अंक बनाएर दोस्रो स्थानमा छ । हालको अवस्थामा बार्सिलोना रियलभन्दा ८ अंकले पछि परिसकेको छ ।
प्रकाशित मिति २० कार्तिक २०७७, बिहीबार १३:००